विष्णु पौडल र शंकर पोखरेलको सम्बन्ध : महासचिवमा को बलियो ?
विधान महाधिवेशन सकेर राष्ट्रिय महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा लागेको नेकपा एमालेमा अबको नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने यतिबेला आम चासो छ ।
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८ ३:१२
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। विधान महाधिवेशन सकेर राष्ट्रिय महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा लागेको नेकपा एमालेमा अबको नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने यतिबेला आम चासो छ । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
विधान महाधिवेशनबाटै आफू अध्यक्ष बन्न सहज हुनेगरी विधान पारित गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष पदमा निर्विकल्प निर्वाचित हुने लगभग पक्का भइसकेको छ । अध्यक्षमा आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद विधान महाधिवेशनबाट सिर्जना गरिसकेको छ ।
पार्टीभित्र आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि ओली विभिन्न नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् । चितवनमा हुन लागेको १० औँ महाधिवेशनमा सहमतिकै आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने नेताहरूले बताइरहेका छन् ।
अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीमा को–को आउलान् ? भन्ने विषय यतिबेला एमाले वृत्तमा चर्चा छ ।
पदाधिकारीमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिने पद हो, महासचिव । महासचिवलाई अध्यक्षपछिको कार्यकारी पदका रूपमा पनि लिइन्छ । विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि महासचिव नै प्रमुख कार्यकारी पद थियो ।
केही समय अघिमात्र एमाले छाडेर नयाँ दल बनाएका माधवकुमार नेपाल पनि १५ वर्ष महासचिवकै रूपमा पार्टी नेतृत्वमा बसेका थिए ।
एमालेको आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेल अहिले ओलीलाई अध्यक्ष छाडेर आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने दाउमा छन् । महासचिव पदमा पुनः नदोहोरिने पोखरेलले बताइसकेका छन् ।
पार्टीको कार्यकारी पद मानिने महासचिवको जिम्मेवारी कसको काँधमा आउला भन्ने धेरैको चासो छ । सहमतिकै आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने नेताहरूले बताइरहँदा ओलीको रोजाइमा पर्नेले नै महासचिवको जिम्मेवारी पाउने नेताहरू बताउँछन् ।
महासचिव को हुँदैछन् ? भन्ने प्रशंगमा गफगाफ भइरहँदा एक एमाले नेताले बताए, ‘यो पटक सबै पदाधिकारी बालकोट(ओली निवास)बाट नै निर्वाचित हुने हुन् । ओलीको रोजाइमा पर्नेले बाजी मार्छ ।’
महासचिव पदलाई ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । जसमा नवौं महाधिवेशनबाट उपमहासचिव बनेका विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको चर्चा छ ।
चर्चा सुरु गरौँ पोखरेलबाट,
पार्टीभित्र बौद्धिक नेताको छाप बनाएका छन् पोखरेलले ।
नवौं महाधिवेशनसम्म पोखरेल पौडेलभन्दा निकै कमजोर थिए । दुवै जना ओली प्यानलबाट उपमहासचिवमा उठेका थिए, पोखरेलले त्यो महाधिवेशनमा हारे ।
कुनै समय जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग निकट रहेर काम गरेका पोखरेलले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट स्थापित भई पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी लामो समय काठमाडौंलाई आधार बनाएर केन्द्रीय राजनीतिमै सक्रिय रहे ।
काठमाडौंमै रहेका कारण पोखरेलको दाङको राजनीतिक आधार कमजोर थियो ।
पोखरेलले ०५१ सालको मध्यावधि र ०७४ को प्रदेशसभाबाहेक कुनै पनि निर्वाचनमा जित हासिल गरेका छैनन् । तर, सैद्धान्तिक विषयमा विशेष रुची र पकड राख्ने उनी केन्द्रीय तहका नेताहरूमा छुट्टै छाप छाड्न भने सफल मानिन्छन् ।
मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशको राजधानी र नामको विषयमा पोखरेलको चर्चा निकै भयो । एकातिर पौडेलले बुटवललाई राजधानी बनाउन लविङ गरिरहेका थिए भने पोखरेलको प्रयास दाङमै राजधानी बनाउनेतिर थियो ।
केन्द्रको राजनीतिमा छुट्टै छाप छाडेका पोखरेल राजधानी दाङ सार्न सफल भइदिए । धेरैका लागि यो अप्रत्यासित पनि थियो । किनभने, ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध बढाउँदै गएका पौडेलले कुनै हालतमा राजधानी बुटवल बनाएरै छाड्ने धेरैको बुझाइ थियो ।
पोखरेलले यो मुद्दामा बाजी मारेपछि पौडेल केही कमजोर हुँदै गएको आंकलन अहिले पनि प्रदेशका नेताहरू गर्छन् ।
अनि पौडेलका कुरा,
नवौं महाधिवेशनबाट उपमहासचिव बनेका विष्णु पौडेल पनि ओलीका विश्वासपात्र मध्येका एक हुन् ।
०१७ सालबाट कलेजको पढाइ छाडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको उनको इतिहास छ । पछिल्लो पटक रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् ।
एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा पौडेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि पार्टीको ९ जना सचिवालयमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको महासचिवमा पौडेलले नै बाजी मारे । त्यतिबेला ईश्वर पोखरेललाई ‘जिल’ खुवाउँदै पौडेल महासचिव बन्न सफल भएको भन्दै चर्चा चुलिएको थियो ।
पौडेललाई एमालेका नेताहरू तीक्ष्ण र चतुर पोलिटिकल खेलाडीका रूपमा लिन्छन् । नेकपा कालीन बेलामा महासचिव भएपछि चतुर मानिने पौडेल प्रचण्डतिर ढल्किएका हुन कि ? भन्दै धेरैले शंका गर्न थालेका थिए ।
नेकपा विभाजन भएपछिको एमालेमा पौडेल ओलीको कुनै कुरा नकाटी अघि बढिरहेका छन् । तर, यो महाधिवेशनबाट महासचिव बनेर ११ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्ने दाउ उनको देखिन्छ ।
पोखरेल–पौडेल सम्बन्ध !
दशौं महाधिवेशनमा महासचिवको सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका मध्येका नाम हो–पोखरेल र पौडेल ।
यी दुवै नेता अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन् । ओलीले पनि यी दुवै नेतालाई परिस्थिति हेरेर पार्टीका काममा अघि बढाइरहेका हुन्छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेपछिको नेकपाको महासचिव ओलीले पौडेललाई बनाए । पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएर पठाएका थिए ।
यी दुवै नेता लुम्बिनी प्रदेशबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ बनेपछि भने दुई नेताबीचको सम्बन्धमा केही खटपट भएको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
किनभने रूपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका पौडेलको चाहना बुटवलमै राजधानी बनाउने थियो । दाङको देउखुरी क्षेत्रमा राजधानी निश्चित भएसँगै पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने हल्ला चलेको थियो । उनलाई बुटवलवासीले अर्थमन्त्री बनेर राजधानी साट्न पाइन्न भनेर खबरदारी गरेका थिए ।
खबरदारी गरेको हप्ता दिनपछि पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । राजधानी सार्ने विषयमा बुटवलका जनता सडकमा ओर्लिँदा मुख नखोलेको आरोप पौडेलमाथि लाग्यो ।
यी दुवै नेताको ओलीसँग सम्बन्ध, राजनीतिमा चातुर्यता, एउटै प्रदेशबाट गरेका राजनीति मात्र समान छैन । यो पटक हुने महाधिवेशनमा देखिएको आकांक्षा पनि एउटै छ ।
ओलीको रोजाइमा को ?
नेकपा एकता बेलादेखि नै पौडेलले ओलीलाई नजिकबाट साथ दिएका छन् । अप्ठ्यारो पर्दा ओलीकै पक्षमा उभिएका छन् । तर सबैबीच उनका आफ्नै मान्यता, सर्त र स्वार्थ भएजस्तो बुझिन्छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेरै निर्णय गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
यद्यपि, पौडेलप्रति ओलीको भरोसा कायमै छ भन्नलाई अर्थमन्त्री बनाइदिएपछि पुष्टि भएको थियो । बालुवाटार काण्डमा मुछिँदादेखि नै ओलीले दिएको साथलाई पौडेलले बिर्सन सकेका छैनन् ।
नेकपामा पाएको अवसरले उनलाई पार्टीको महासचिवका रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । त्यो पदमा उनको परीक्षण भइसकेको छ । त्यसैले एमालेमा पनि महासचिवको जिम्मेवारी पाउन र भूमिका निर्वाह गर्न उनी उत्साहित देखिन्छन् ।
तर, एमाले विधान महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भने त्यसलाई परिस्थिति अलिक फरक देखिएको छ ।
गत १५ असोजमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा ओलीले पोखरेललाई खोजेपछि पौडेल झस्किएका थिए ।
विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पढिरहेका ओलीले आफूलाई रुघाखोकी लागेको भन्दै पोखरेललाई खोजे । ओलीले भनेका थिए, ‘कमरेडहरू, मलाई अलिकति रुघाखोकीको कारणले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अलि समस्या भएकाले म कमरेड पोखरेललाई आग्रह गर्छु । मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ।’
प्रतिवेदन लामो भएकाले ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यावस्थाका ख्याल गर्दै पोखरेललाई पढ्न दिए । पढ्दा पढ्दै गाह्रो भएपछि अर्को व्यक्तिलाई पूरा गर्न लगाउनु सामान्य हो । तर, ओलीले रोजेका पात्रलाई लिएर सोही बेलादेखि विभिन्न अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ ।
एमालेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताको अड्कल छ–अब ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा पोखरेललाई रोजे ।
पछिल्लो समय पोखरेल सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् । केन्द्रमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमहरूको खुलेर सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिवाद गरिरहेका हुन्छन्, पोखरेल । तत्कालीन नेकपादेखि अहिलेको एमालेमा देखिएका आन्तरिक विवाद मिलाउन उनी लुम्बिनीबाट तत्काल काठमाडौं आइपुग्थे । उनको सक्रियता सधैं पार्टीको केन्द्रमा रहन्थ्यो ।
नेकपा विवादको अन्तिम समयमा पनि पोखरेलले प्रचण्डसँग खुमलटार पुगेर पटकपटक सल्लाह गरेका थिए । केन्द्रको राजनीतिमा सधैं जमिरहेका पोखरेल यो पटक महासचिवमा बाजी मारेर पुरानो क्षतिपूर्ति पूरा गर्ने दाउमा रहेको निकटस्थ नेताहरूको अड्कल छ ।